Ciyaaryahan Soomaali ah oo lagu magacaabo Abel Gigli oo ay horyaalka Slovenia isla qaadeen hogaamiyaha Milano Gianluca Lapadula oo sheegay in uu doonayo qaranka Soomaaliya+SAWIRRO iyo MUUQAAL – Gool FM
Ciyaaryahan Soomaali ah oo lagu magacaabo Abel Gigli oo ay horyaalka Slovenia isla qaadeen hogaamiyaha Milano Gianluca Lapadula oo sheegay in uu doonayo qaranka Soomaaliya+SAWIRRO iyo MUUQAAL
Baliil December 10, 2016
(Milano) 10 Dis 2016.Ciyaaryahanka Soomaaliyeed ee haysta jinsiyada dalka talyaaniga ee lagu magacaabo Abel Gigli waa xidig ay dhashey hooyo Soomaaliyeed iyo Aabe Talyaani ah laakiin ahaa dadkii Soomaaliya kusoo bar baarey meesha loo yaqaano Fiosone.
Ciyaaryahankankan oo ah daafac Bir ah ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu u dheelo xulka waaweyn ee Soomaaliya,oo uu sheegay inuu guulo u horseedi doono hadii xulka loogu yeero sida u sheegay Ismaaciil Diyeeshe oo ay sxbo yihiin horeyna Xulka uga tirsanaa.
Wuxuu kulankiisi u horeeyey Serie A u dheelay kooxda musaliftey ee Parma, laakiin maadama Parma ay musliftey wuxuu hadda u dheelaa kooxda Lupa Roma oo Gigli heshiis xur ah ku qaadatay 20 September 2016 .
Abel Gigli ayaa waxaa uu dheelay horyaalka Seria A kooxda Parma iyo Champion league isaga oo kamid ahaa daafacyadii ugu fiicnaa,waxaana uu horyaalka Slovenian iska qaadeen xiddiga AC Milano Gianluca Lapadula waxaana uu sheegay in uu la yaabanyahay in uu xiddigaasi noqdo hogaamiyaha Milano.
Xiddigan ayaa waxaa tababar siiyay oo muddo qaadanayay oo dhan kasta ah halyaygii hore ee qaranka talyaaniga Roberto Baggio
“Gianluca Lapadula waxaan eheen weligayn saaxiibo ama walaalo waxaana u wada dheelnay kooxaha Parma iyo Gorica anaga oo ku guuleesanay koobab badan wadanka Slovenia runtii la yaab ayay igu noqotay in walaakey uu u dheelo AC Milano”ayuu Gool FM u sheegay Abel Gigli.
Xiddigan Soomaaliga ah ayaa waxaa uu sheegay in riyadiisa ay tahay in uu xirto maaliyada qaranka Soomaaliya uuna jecelyahay in uu matalo wadankiisa hooyo isaga oo aad ugub farxay in ay lahadasho Gool FM waxaana dhawaan idiin soo gudbin doonaa waraysiga aan la yeelanay xiddigan.
Ismail Mohamed Omar Ali oo ah laaciibkii hore ee qaranka Soomaaliya degana magaalada Milano oo sahlay isku xirka Xiddigan iyo idaacada Gool FM ayaa waxaa uu sheegay in ay jiraan xiddigo badan oo soomaali ah oo dibadaha ka ciyaara kuwaasi oo doonaya in ay qaranka soomaaliya u ciyaaraan balse ay waayeen meel ay kala xiriiraan.
Wuxuu kulankiisi u horeeyey Serie A u dheelay kooxda musaliftey ee Parma 25 April 2010 kulan ay la dheeleen kooxda Bologna markaa oo bedel lagu keenay daqiiqadii 43rd Massimo Paci. bartamaha sanadkii 2010 waxaa laga iibiyey kooxda Atletico Roma oo ay wadaageen kooxda parma,
31kii bishii August 2010 wuxuu aaday kooxda Viareggio. isagoo saftay 3 kulan,wuxuuse ku laabtay Parma 24 June 2011. Kadib July 2011 waxaa deeynlagu siiyey kooxda Fondi.11 July 2013 Gigli wuxuu u saxiixey kooxda Savona F.B.C. laakiin isla 1 August sanadkaasi wuxuu u wareegay koox isla Slovenian kadhisan ee ND Gorica.
9 August 2014 wuxuu dib ugu soo laabtay Italia isagoo usi amaah ah ugu biirey kooxda Serie B ee Crotone laakiin maadama Parma ay musliftey wuxuu hadda u dheelaa kooxda Lupa Roma .
DAAWO MUUQAAL YAR OO KOOBAN XIDDIGAN
Kooxaha AC Milan & Inter Milan oo iskula dheggan Simon Kjaer! (Yaa cad cad)
PSG oo amaah ku doonaysa James Rodriguez